Nagu saabsan - Cangzhou Jinglong Technology Co., Ltd.
Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) waxay ahayd shirkad hormuud ah oo leh joogitaan caalami ah oo ku takhasusay soo saarista iyo iibinta alaabooyinka xirfadleyda ah ee cayayaanka looga xakameeyo madaniga, warshadaha, ka shaqeynta cuntada, guryaha iyo xoolaha.
Shirkaddayadu waxaa la aasaasay 2000 waxayna leedahay warshad u gaar ah oo deggan aag ka badan 5,000 mitir murabac oo ku yaal Degmada Dongguang, magaalada Cangzhou, Gobolka Hebei, Shiinaha. Shirkadeenu waxay leedahay shaqaale ka badan 60 shaqo, oo ay ku jiraan xirfadlayaal caan ah, farsamoyaqaanno, iyo hawlwadeennada qalabka.
Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) waxay leedahay qayb aasaasi ah oo soo saarta alaabada farsamada (shimbiraha, saldhigyada sedka jiirka iyo dabinnada, iwm.) Si loo daboolo baahiyaha macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Qeybta labaad ee shirkaddu waxay la shaqeysaa alaab-qeybiyeyaal gudaha lagu kalsoon yahay waxayna siisaa alaab tayo sare leh xirfadlayaasha cayayaanka adduunka oo dhan. Alaabta waxaa lagu wada rari karaa weel buuxa si loo badbaadiyo qiimaha xamuulka ee adiga kugu baxaya.
Hadda waxaan haynaa koox si buuxda u diyaarisay inay si buuxda oo mas'uuliyad leh u hagto ugana caawiso macaamiisheenna baahiyahooda loo habeeyay.
HALKAN HALKAN SI AAD UGU GUULAYSATO!
KU SOO DHAWAADA JINGLONG
Jinglong wuxuu firfircoonyahay bandhigyada caalamiga ah ee sanadlaha ah ee warshadaha ladagaalanka cayayaanka.
Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa Jinglong (Telex) EXPOCIDA IBERIA, FAOPMA, Parasitec Paris, Pest Italy-Disinfestando, Pest Protect, Pest EX, iwm.
Waxaan jeclaan lahayn inaan ka maqalno saaxiibadeena hore iyo kuwa cusub ee ku saabsan baahiyahooda.
Hagaajinta alaabtayada iyo bixinta adeeg habeysan ayaa ah waxa Jinglong diiradda lagu saaray.
Jinglong wuxuu helay shahaadada ISO9001: 2015 iyo Qiimaynta Xaaladaha Shaqada oo ay ansixisay Intertek.